यस्तो ड’रलाग्दो गरी शक्तिशाली अम्पुन चक्रवात नेपाल आउँदै, सबैलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/यस्तो ड’रलाग्दो गरी शक्तिशाली अम्पुन चक्रवात नेपाल आउँदै, सबैलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह !
यस्तो ड’रलाग्दो गरी शक्तिशाली अम्पुन चक्रवात नेपाल आउँदै, सबैलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह !
काठमाडौं – बङ्गालको खाडीबाट अम्पुन नामको शक्तिशाली चक्रवात नेपाल आउँदैछ । यतिबेला दक्षिण बङ्गालको खाडीको मध्य भागमा अम्पुन चक्रवातले आफ्नो शक्ति बटुलेर अघि बढेको छ । अम्पुन चक्रवात धेरै शक्तिशाली भइसकेकाले त्यसको असर नेपालमा केही दिन तीव्र रूपमा पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । चक्रवात अझ शक्तिशाली हुने क्रममा मङ्गलबारबाट पूर्वी नेपालको मौसममा बदली हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने महाशाखाकी मौसमविद् गङ्गा नगरकोटीले बताइन् । उनका अनुसार त्यस चक्रवातको गति उत्तरपश्चिम हुँदै अघि बढिरहेको छ ।
उनले भारतको पश्चिम बङ्गाल क्षेत्र हुँदै पूर्वी नेपालको पहाडी भूभागमा अ’सर पार्नेछ, त्यसपछि मध्य र पूर्वी नेपालका भूभागमा असर गर्नेछ, जसका कारण त्यस क्षेत्रमा वर्षा हुनेछ भनिन् । पश्चिम भूभागमा भने त्यसको तुलनामा कम वर्षा हुनेछ । त्यस पछिको दुई/तीन दिनसम्म देशैभरि बदली भई केही स्थानमा भारी वर्षाका साथै उच्च हिमाली क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातका साथै एक/दुई स्थानमा भारी हिमपातसमेत हुने सम्भावना छ ।
सरकारको निर्देशन उद्योगीले मानेनन्, लकडाउनमा ५० प्रतिशत मात्रै तलब